ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားပန်းခြံဘာတွေလဲ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဥရောပမှာတော့အကောင်းဆုံးအမျိုးသားပန်းခြံဘာတွေလဲ
သငျသညျအကြီးအအပြင်မှာတစ်ဦးကိုနှစ်သက် Are? ကျနော်တို့သစ်တောတွေပြောနေတာဖွင့်, ရေကန်များ, သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်မန်များ. တောင်တက်, စက်ဘီး, နှင့်အထွေထွေလတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေကောင်းမြတ်ခြင်း. ထိုအခါရှာဖွေတွေ့ရှိ ဥရောပ၌အလှဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ်, နှင့်မည်သို့ရထားအဲဒီမှာရဖို့.
လူအစုအဝေးကိုမေ့လျော့, အဆိုပါမေ့လျော့ ကမ်းခြေ, မြို့ကြီးများမေ့လျော့ခြင်းနှင့် စျေးဝယ်, နှင့်အပန်းဖြေဖို့လာ အကောင်းဆုံးကိုအမျိုးသားဥယျာဉ် ဥရောပမှာ.
သဘာဝအလျောက်လာရောက်လည်ပတ်သော်လည်း ဆွဲဆောင်မှု သစ်တောတွေတစ်ဦးအပေါ်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်ကဲ့သို့သော ရထားခရီး, သေသောသူတို့ကိုဖယ်ဖို့မအကြောင်းပြချက်င်. အဆိုပါသဘာဆွဲဆောင်မှုအတွက်အလုပ်ရှုပ်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောဆနျ့ကငျြဘပူဇော် မြို့ကြီးများ, နှင့်သုတေသနပဲနည်းနည်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုသူတို့ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား၏အကူအညီဖြင့်ရောက်ရှိရန်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်အဆင်ပြေနေရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ယင်း၏ရှုပ်ထွေးနာမတျော၏ကြားမှ, Saxon ဆွစ်ဇာလန်အမျိုးသားဥယျာဉ် အတွက်အလွန်ဖြစ်ပါသည် ဂျာမနီ. ဒါဟာအနောက်မြောက်ပိုင်းချက်သမ္မတနိုင်ငံနှင့်အတူနယ်စပ်တစ်ကျယ်ပြန့်သည့်သဘာဝဒေသင်. ဒါဟာတိုင်းပြည်ရဲ့သာရော့ခ်အမျိုးသားဥယျာဉ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းထူးချွန်သစ်တောများဖုံးလွှမ်းမယ့်. ခွမှဒေသတွင်းအတော်များများခေါင်းကို, ဒါပေမယ့်လည်းရှိပါတယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်သမိုင်း လေ့လာစူးစမ်းဖို့, အဆိုပါ Konigstein ခံတပ်အပါအဝင်.
ရထား Saxon ဆွစ်ဇာလန်ရဖို့ကိုဘယ်လို:
ပန်းခြံမှအနီးဆုံးကြီးတွေမြို့ Dresden ဖြစ်ပါသည်, ဂျာမဏီ၏အများကြီးကနေရထားလမ်းအားဖြင့်ရောက်ရှိရန်လွယ်ကူရာဖြစ်ပါသည်. ထိုအရပ်မှ, က S-Bahn ရထား Saxon ချိတ်ဆက်. ဆွစ်ဇာလန် တိုင်း 30 မိနစ်များ.
သငျသညျဂျာမနီမှာနေနေစဉ်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုလည်းသွားရောက်ကြည့်ရှုအကြံပြု Black ကသစ်တော. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အလယ်ပိုင်းဥရောပရဲ့အကျော်ကြားဆုံးသစ်တော, ဒီလွဲချော်တမဟုတျပါဘူး. တောင်ဘက်-အနောက်ဂျာမဏီ၌ဤရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တောင်ထူထပ်သောဒေသအားလုံးရှိပါတယ် - သိပ်သည်းအမြဲစိမ်းသစ်တောများ, အံ့သြဖွယ် တောင်များ, နှင့် quaint ကျေးရွာပေါင်း. ဒါဟာပြန် 1700 မှချိန်းတွေ့ cuckoo နာရီမှအိမ်ပြန်မယ့်, နှင့် ရွာများစွာ ဝေးကွာသောအချိန်၌စိတ်အားထက်သန်စွာမှီဝဲခံစားရတယ်. အဆိုပါ နတ်သမီးပုံပြင်-ပုံပြင်လေထု အစစ်အမှန်ကမ္ဘာမှအပြည့်အဝ ESCAP မှဿုံသူ့ဟာသူချေးငှားသည်, သောသင်ရှာနေတာရဲ့လျှင်!
ရထားက Black ကသစ်တောရဖို့ကိုဘယ်လို:
ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးက အတှေ့အကွုံ အဆိုပါ Black ကသစ်တောရထားဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ Black ကသစ်တောလိုင်း Offenburg နှင့် Konstanz အကြားပြေး. ဒါဟာလမ်းတလျှောက်တွင်အများအပြားမြို့များအတွက်ဒေသနှင့်မှတ်တိုင်များ၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အမြင်များကမ်းလှမ်း.
Hallerbos သစ်တော, သို့မဟုတ် "အဆိုပါအပြာရောင်သစ်တော", ရှည်လျားသောများအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်သစ်တောစုံလင်သည် ဇါတ်စင်နှင့်ဆိုင်သော ဘာ့ဂ်. ထ pop ရာ bluebells ၏ကျယ်ပြန့်ကော်ဇော ဧပြီလလယ် နှစ်စဉ်လှပတဲ့သစ်တောကအမည်အားပေး. ပွညျသူပွညျသားဤလှပသောလမ်းပိုင်းတစ်ဦးအလည်အပတ်တစ် rejuvenation အတွေ့အကြုံကိုစေကုမ္ပဏီကြီး Sequoia သစ်ပင်များလည်းရှိပါတယ်.
အဆိုပါ bluebells ဖမ်းရန် Hallerbos သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ရာသီဥတုအပေါ်မူတည်ကြောင်းမှတ်ချက်. အဆိုပါရှိရာသို့အလျင်အမြန်အပူချိန်မြင့်တက်, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်အပွင့်ပွင့်. အခုတော့သွားကြဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ပူနွေးနည်းနည်းနောက်ပိုင်းမှာနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ဧပြီလထက်ဆည်းပူးခဲ့ကြဟန်အဖြစ်. ဒါပေမယ့်အဖြစ်အချိန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပြေးပြိုင်ပွဲရဲ့ ပူနွေးသောရာသီဥတု ထို့ပြင်သစ်ပင်များပြန်သူတို့ရဲ့အရွက်ရသည်ဟုဆိုလိုသည်, နေရောင်ခြည်၏ bluebells မှု, သောသူတို့အား grayish turn စေသည်. သင့်ရဲ့အဘို့အဘယ်သူမျှမကအကောင်း Instagram ကို pics!
အခါ bluebell ရာသီ ချဉ်းကပ်မှု, အဆိုပါ Hallerbos ပို့စ်များကိုနေ့စဉ် updates များကိုများ၏က်ဘ်ဆိုက် (တစ်ပတ်ကာလအတွင်း) အဆိုပါ bluebells ၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်.. ဓာတ်ပုံဆရာများနှင့်အခြားဧည့်သည်များကပါသေးသွားကြဖို့စောလွန်းရဲ့ရှိမရှိသိသောလမ်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့တက်မြန်မြန်သင့်ပါတယ်ရှိမရှိ.
ရထား Hallerbos သစ်တောရဖို့ကိုဘယ်လို:
ပုံမှန်ရှိပါတယ် ဘရပ်ဆဲလ်ကနေရထား ပဲယူကြောင်း Halle မှ 16 မိနစ်များ. ထိုအရပ်မှ, TEC ဘတ်စ်ကားအရေအတွက်ကဖမ်း 114 သစ်တောဝင်ပေါက်ရ.
ပေါ်တွင်သင်၏သဘာဝအရအဆင်သင့်? ထိုအခါအကြီးအမှထိုလက်မှတ်မှာပါ အိမ့်ပြင်တွင် ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထား၏အကူအညီနှင့်အတူ. အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအဖိုးအခ. ရုံကြီးမြတ်ခရီးသွားလာ!
Halle ရထားမှ Antwerp
Brugge Halle မှရထား
ဂျန့်မြို့မှာ Halle မှရထား
HARDANGERVIDDA National Park, နော်ဝေး
အကြီးဆုံးအမျိုးသားဥယျာဉ် နော်ဝေ တစ်ဦးအိမ်ပြင်-လူသားရဲ့ပရဒိသုဖြစ်ပါသည်. မျက်နှာကြက်ကုန်းပြင်မြင့်, မှာဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်လွင်ပြင်ထဲကတစ်ခု 2,500 စတုရန်းမိုင်, ခြုံနွယ်သစ်ပင်များလွှမ်း moorlands နှင့်မြောက်မြားစွာရေကန်များဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်, မြစ်များ, နှင့်စီး. လုံးဝ treeline အထက်, သငျသညျတိုင်းဦးတည်မိုင်တွေ့နိုင်ပါသည်, ကအောင် တောင်တက်အဘို့ကြီးသောဟော့စပေါ့.
သငျသညျဆိုရင် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ရှည်လျားသောခရီး, တစ်ဦးထုပ်ပိုးရန်သေချာစေပါ ငါးမြှားတံ: ဒီမှာရေကိုငါးနှင့်အတူ teeming နေကြတယ်. Fans of reindeer will find that Hardangervidda is among the best national parks for them, ယင်း၏နွားများကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတချို့ရှိနေပါတယ်အဖြစ်. အတော်လေးလွင်ပြင်ကိုဖြတ်ပြီးအညီ reindeer ပါပြောင်းရွှေ့ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စောင့်ကြည့်တူသောဘာမှမရှိဘူးင်; ဒါကြောင့်သူတို့ဘဝအတွက်တစ်ချိန်ချိန်လူတိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးမျက်မှောက်င်.
သငျသညျအော်စလိုနေပြီးတာနဲ့, သင်လိုအပ် ရထား Hardangervidda ရ သငျသညျ Telemark အတွက်အော်စလိုကနေဘိုမှရထားယူနိုင်ပါသည်. ထိုအရပ်မှသင်တို့ကိုအမီလိုက်နိုင်ပါတယ် “Haukeliekspressen” Rauland မှ. သင်တို့သည်လည်းအော်စလိုကနေ Hardangervidda ရှာဖွေစူးစမ်းအဘို့ကြီးသောစတင်အချက်များဖြစ်ကြောင်းနေရာများကိုနံပါတ်ဖို့ဘာဂန်မီးရထားယူနိုငျသညျ - https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fflam-to-myrdal-norway%2F%3Flang%3Dmy, ဖင်လန်, Haugastol, Ustaoset နှင့် Geilo.
ဘာဂန်ကနေ Hardangervidda မှရထား The Bergen Railway stops at number of places that are great starting points for exploring Hardangervidda – Myrdal, ဖင်လန်, Haugastol, Ustaoset နှင့် Geilo. သင်တို့သည်လည်း Voss ထံမှ Eidfjord မှ Voss မှရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားယူနိုင်ပါသည်.
သင့်ရဲ့ရေပုံးစာရင်းဥရောပအကောင်းဆုံးအမျိုးသားပန်းခြံအချို့ထည့်သွင်းဖို့အဆင်သင့်? စို့ တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျလျင်မြန်စွာအဲဒီမှာ get ကူညီ, နှင့် ADDED မပါဘဲ, ဝှက်ထားသောကုန်ကျစရိတ်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnational-parks-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#Europeparks #Nationalparks #nationalparkseurope europetravel longtrainjourneys ရထားခရီးသွား travelbelgium travelgermany .ရာဝတီ traveltips